Wararka - Bixinta ugu Weyn ee Dibadda ee 2021
GOJON Gaarsiiyo Nidaamka Kaarboonka Baabuurka iyo PMS Thailand
Bilowgii 2021 -kii, GOJON khadka tooska ah ee kaarboorka jiingadda ah iyo Nidaamka Maareynta Wax -soo -saarka ayaa dhammeeyey wax -soo -saarkii oo tijaabiyey si habsami leh. Qalabkan dhammaystiran ee khadka gudbiyaha waxaa loo adeegsan doonaa mashruuca Bangkok, Thailand.
Waxaan mar hore iskaashi la samaynay macaamilkan in ka badan 10 sano. Kalsoonida macmiilka ayaa ah rajadayada.
Iyada oo leh tayo aad u fiican oo badeecooyin ah, shabakad suuq geyn oo kaamil ah oo aad u fiican adeegga iibka ka hor, adeegyada iibka iyo adeegyada iibka kadib, alaabta GOJON waxaa si wanaagsan loogu iibiyaa dalal badan sida Jarmalka, Talyaaniga, Spain, Greece, Russia, Belarus Japan, Thailand iyo Hindiya iwm oo ku guulaysatay ammaan badan oo macaamiisha ah.
GOJON waxay rumeysan tahay in Xamaasaddu ay Gaadho Riyo oo Riyadu waxay abuurtaa Mucjiso, waxayna had iyo jeer ku dhegi doontaa sprite -ga meheradda ee “Bixi alaabta ugu fiican iyo adeegga ugu fiican qiimaha ugu macquulsan”.
GOJON waxay filaysaa inay si wadajir ah ula koraan macaamiisha, oo ay u abuuri doonaan guul-wadareed muddo dheer.
GOJON wuxuu gaarsiiyaa khadka tooska ah ee Smart Smart ee Ruushka bisha Maarso iyo khadka tooska ah ee kartoonnada si toos ah u gaarsiiya Belarus Abriil-Abriil 2021
Maarso, 2021, GOJON qalabkiisa Smart: Rotator Auto, Auto Breaker iyo system conveyor ayaa la dhammaystiray oo si habsami leh loogu tijaabiyey aqoon isweydaarsiga. Khadkan caqliga badan waxaa laga isticmaali doonaa Moscow, Russia.
Abriil, 2021, GOJON khadka tooska ah ee kaarboorka jiingadda ah ee si otomaatig ah u dhammaystiray soo -saarka oo tijaabiyay si habsami leh. Khadkan gudbiyaha waxaa lagu isticmaali doonaa gudaha Minsk, Belarus.
Sida hal-soo-saare xirfadle ah oo ku jira xammuulka warshadda oo dhan, Single Facer Laminating Smart line, Nidaamka Maareynta Wax-soo-saarka iyo sanduuqa sanduuqa kartoonka iwm . GOJON wuxuu isku daraa R&D, waxsoosaarka, iibinta iyo kooxda adeegga iibinta kadib, hababka maareynta casriga ah iyo fikradaha si ay u siiyaan badeecooyin tayo leh & xasilooni leh, xirmooyin xirmo oo dhammaystiran iyo tas-hiilaad la xiriira.
GOJON waxaa ka go'an inay siiso xalalka leexashada badeecado ka sarreeya iyo adeeg kaamil ah shirkado badan si ay u abuuraan qiime iyo macaash.
In ka badan 10 sano oo waayo -aragnimo ah, GOJON waxay xiriir wanaagsan oo xasilloon la yeelatay hay'adaha cilmi -baarista sayniska iyo kulliyadaha sayniska, oo had iyo jeer ku dadaala sidii loo hagaajin lahaa wax -soo -saarka wax -soo -saarka oo loo tayayn lahaa qaab -dhismeedka wax -soo -saarka si loo xaqiijiyo badeecadaha ugu xasilloon & caqliga badan.
Nidaamka Rullaluudlaha, Gawaarida Xamuulka qaada, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, A3 Faylka Waraaqda, Bangiga Erp,